Allgedo.com » Dowladda Uganda oo sheegtay in Saraakiil looga dilay dagaalada Muqdisho.
Dowladda Uganda oo sheegtay in Saraakiil looga dilay dagaalada Muqdisho.
Print here| By: allgedo.com: Monday, June 6, 2011 // Jawaabaha waa la xiray
Saxaafadda dalka Uganda ayaa wax ka qortay dagaalada ka socda magaalada Muqdisho ee dalka Soomaliya maadaama ay Uganda ciidamo ka jogaan Somaliya.
Wargeyska Daily Monitor ee kasoo baxa dalka Ugandha ayaa markii ugu horeysay xaqiijiyay in dagaaladii maalmo ka hor ka dhacay degmada Boondheere lagu dilay Sarkaal sare oo ka tirsanaa Ciidamada dalka Ugandha ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wargeyska oo soo xiganaya Taliyaha ugu sareeya Ciidamada Shisheeyaha ee Muqdisho ku sugan ayaa sheegay in Sarkaalka la dilay uu ahaa Korneyl (Colonel) ka tirsan Ciidamada Ugandha ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Taliyaha Ciidamada Shisheeyaha ee Muqdisho ku sugan Nathan Mugisha oo la hadlayay Wargeyska Daily Monitor ayaa xusay in Korneylka la dilay uu hogaamiye u ahaa Guutada lixaad ee Ciidamada Ugandha, wuxuuna tilmaamay in Korneylka iyo Shan Askari oo kale lagu dilay dagaalo labo maalmood ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho.
Saxaafadda Uganda waxay adkeysay in madaxda dowladda aysan si sax ah shacabka ugu sheegin khasaaraha ciidanka UPDF kasoo gaara dagaalada Muqdisho sababa la xariira taageerayaasha Hogaamiyaha Mucaaradka oo dhigaya rabshado ka dhan ah xukuumadda Moseveni awgeed.